Falastiiniyiinta ku jira jeelasha Israel oo cunto joojin ay wadeen soo af-jaray - BBC News Somali
Falastiiniyiinta ku jira jeelasha Israel oo cunto joojin ay wadeen soo af-jaray
Image caption Barghouti (ninka ku sawiran boodhka) ayaa ka mid ah 7,000 ee Falstiiniyiina jeelasha Israel ku xidhan
Saraakiisha Israel ayaa sheegay in talaabadan, oo ku soo beegantay bilashada bisha Ramadaan, ay ka dhalatay heshiis la gaadhay oo loogu ogolaanayo maxbuus walba in bishii laba goor ehelkiisu booqasho ugu yimaadaan halkii ay markii hore ka ahayd mar qudha bishii.
Mudaharaadkan cunto joojinta ah waxa hogaaminayey Marwan Barghouti, oo ah hogaamiye Falastiini ah oo Israel ku xukuntay madaxaa ha ku furto, ka dib markii ay sheegtay in lagu helay inuu shan qof dilkooda ka dambeeyey.
Barghouti ayaa la filayey inuu noqon karo ninka mustaqbalka hogaanka maamulka Falastiiniyiinta kala wareegi doona Madaxweyne Maxmuud Cabbaas.
Ku dhawaad 1,187 maxbuus ayaa mudaharaadkan cunto joojinta ah waday sida ay sheegeen ciidamada asluubta ee Israel.
Wuxu bilaabmay 17 kii April oo ah maalinta ay Falastiiniyiintu u asteeyeen maalinta maxaabiista Falastiin, oo ah maalin ay xusaan asxaabta iyo ehelada maxaabiistu dadkooda xidhan.
Arinta maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ku jira jeelasha Israel ayaa ah xiisad taagan oo mudoba ka dhex aloosnayd labda dhinac.
Falastiiniyiintu waxay u arkaan dadkaa xidhan maxaabiis siyaasadeed. Kuwo badan oo ka mid ahna waxa lagu helay dambiyo ah weeraro ay ku qaadeen Israel iyo falal dambiyeedyo kale.
Kuwo kale ayaa iyagana lagu xidhan sifo waafaqsan xeerka ay Israel ku sheegto xabsi maamulka, kaas oo awood u siinaya in dadka la tuhunsanyahay la hayn karo mudo lix bilood ah iyada oon wax dacwad ah lagu soo oogin.
Urur Falastiini ah oo u ololeeya xuquuqda maxaabiista ayaa sheegay in tirada dadka Falastiiniyiinta ah ee ku jira jeelasha Israel dabayaaqadii sanadkii hore tiradoodu ahayd 7,000 oo qof.